Lalaon’ny nosy: efa milamina ny fandaharam-potoana rehetra | NewsMada
Lalaon’ny nosy: efa milamina ny fandaharam-potoana rehetra
Par Taratra sur 16/07/2019
Telo andro mialohan’ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy, ny lalaon’ny Nosy, hotanterahina any Maorisy, efa milamina amin’ny ankapobeny ny fandaharam-potoana rehetra, raha ny nambaran’ny avy eo anivon’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena. Fifaninanana andraindrain’ny Malagasy handrombahan’ireo atletantsika medaly maro sy hitondran’izy ireo avo ny voninahi-pirenena, ka tsy hatao ambanin-javatra. Atleta malagasy 218 avy amin’ny taranja miisa 14 no hiaro izany voninahi-pirenena izany, manomboka ny faha-19 jolay izao.
Taorian’ny fiaingan’ireo ampahany voalohany amin’ny delegasiona, ny faran’ny herinandro teo, nisy ny fandaminana nataon’ny MJS ka hanainga, anio, indray ny andiany manaraka, izay hotarihin’ireo mpitarika ny delegasiona malagasy sy ny lehiben’ny iraka, lahy sy vavy amin’ity andiany faha-10 amin’ny lalaon’ny Nosy ity. Araka ny vaovao voaray avy eny anivon’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahatantena hatrany, hanainga anio, ihany koa ireo delegasiona malagasy ny taranja lomano, ity taranja ity izay manana mpilomano miisa 10 mianadahy hiatrika ny lalaon’ny Nosy atsy Maorisy. Nampanantena izy ireo fa hitondra avo ny lokom-pirenena ary tsy maintsy misalotra medaly miverina eto an-tanindrazana.
Fantatra fa rahampitso, alakamisy indray no hanainga ny andiany manaraka amin’ireo delegasiona malagasy hihazo an’i Maorisy.
Eo am-piandrasana izany, toy izao ny isan’ireo atleta isaky ny taranja, hiatrika ny lalaon’ny Nosy: Atletisma (36), Badminton (8), Basikety (24), Ady totohondry (8) , Hazakazaka am-bisikileta (5), Baolina kitra (20), Fibatana fonjamby (20), Lomano (10), Rugby à 7 (12), Tenisy ambony latabatra (12), Volley (24), Handisport (15), “volet jeunesse” (14).